🏕️ Camping | Booqo Hultsfred
Dooro kan aad ugu jeceshahay, xir safarka gawaarida oo halkan kaalay!
Haddii aad la safarto gaari xamuul ah, mootada gawaarida ah ama aad qorsheyneyso inaad degto intaad joogto, waxaa jira dhowr kaamam oo kala duwan - oo u dhow harada, muuqaalka iyo bartamaha.
Qalinka silsiladda Weyl
Booska gawaarida ee beerta Kalvk gardentte oo leh biyo, WC iyo qashinka.
Målilla Hembygdsparks dhigashada
Målilla Hembygdsparks dhigashada. Baarkinka weyn ee Målilla hembygdspark waxaa ku yaalo baarkinka gawaarida gawaarida lagu raaco iyo mootooyinka.
Xuquuqda bartamaha agagaarka harada iyo wadiiqada, saldhigga waxaa ku yaal afar meel oo baabuurta la dhigto. Xor ah u istaag hal habeen. Haddii aad rabto adeegga garoonka, fadlan tixraac Camping Hultsfred
Kaamamka dabiiciga ee Hesjön
Waqooyiga Målilla waa xerada dabiiciga ee Hesjön. Waxaa jira meelo baabuurta la dhigto oo loogu talagalay caravans iyo guryaha guurguura, iyo sidoo kale goob teendho ah oo gooni ah. Baarkin naafada Laga soo bilaabo meesha baabuurka waxaa jirta waddo la beddeli karo oo hoos loo dhigo
Xerada deegaanka ee Lönneberga
Meelaha gawaarida la dhigto ee loogu talagalay gawaarida, gawaarida gawaarida iyo suurtagalnimada kaamamka Halkan waxaa laga heli karaa musqusha naafada ah oo leh biyo kulul iyo qolka beddelaadda. Aagga Hilibka lagu dubto iyo qiyaastii 900 mitir ka badan
Kaamamka dabiiciga ee Stora Hammarsjön
Si qurux badan ugu yaal agagaarka deegaanka ilaalinta dabeecadda iyo kalluumeysiga Stora Hammarsjön Wax yar ka baxsan Hultsfred waa Stora Hammarsjön aagga ilaalinta dabeecadda iyo ilaalinta kalluunka. Stora Hammarsjön, qiyaastii 10 km, waxaa ku yaal mid ka fudud